बेल्जियमको स्थानीय चुनावमा दर्जन नेपाली मूलका उम्मेदवार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बेल्जियम । बेल्जियममा अगामी अक्टोबर १४ तारिखका हुन गइरहेको स्थानीय र प्रादेशिक निर्बाचनमा एक दर्जन नेपाली उम्मेदवारहरुले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्।
बेल्जियमका विभिन्न सहरहरूबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका नेपालीहरूसंग नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले मंगलबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नेपालीहरुले सत्तासिन र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत स्थापित राष्ट्रिय ६ वटा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।